Usoro mgbochi akụ mmiri igwe ọ nwere ike ịmetụta ụkọ mmiri na mpaghara mmiri? | Netwọk Mgbasa Ozi
A na-atụle usoro mgbochi akụ mmiri igwe na nsonaazụ ha nwere ike ịbụ ụkọ mmiri n'ọtụtụ oge. E nwere usoro ihe arụ ọrụ mgbe a tụrụ anya na a ga-enwe mmiri ozuzo n’ụdị akụ mmiri igwe na ụfọdụ ụgbọ elu ndị Steeti na-agbasasị ọlaọcha iodide iji gbazee igwe ojii, na-ezere akụ mmiri igwe na mmebi nke ihe ọkụkụ. A kọọrọ nke a ọtụtụ oge dị ka ihe na-emerụ ahụ n'ezie.
Usoro mgbochi mmiri mmiri ọ na-emetụta ụkọ mmiri na mmiri mmiri?
1 Unwu ala na mmiri mmiri na usoro mgbochi mmiri
2 Zere akụ mmiri ígwé na ọlaọcha iodide
Unwu ala na mmiri mmiri na usoro mgbochi mmiri
Laguna de Gallocanta, mmiri mmiri nke dị na Spain, na-enwe oke ọkọchị mgbe afọ ise gara aga. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ ugbo 300 si Guadalajara, Soria, Zaragoza na Teruel Ha ezukọtala iji kpaa maka onye kpatara ubi na-akpọnwụ n'ihi enweghị mmiri ozuzo.
Ndị ọrụ ugbo na-akọ na "ụgbọ elu na-enyo enyo" na-apụta mgbe igwe ojii mmiri ozuzo na-achọ ịmalite wee laa n'iyi na-enweghị ntụpụ. Silver iodide bụ kemịkal kemịkalụ nke na - enyere aka igbari igwe ojii na - agbasa igwe ojii.
Ọ bụ ezie na ndị ọrụ ugbo abụghị ndị ọkà n'ihe ọmụmụ physics ma ọ bụ ọkà mmụta ihu igwe, ha na-azọrọ na ha maara eluigwe na ụwa, ebe ha rụworo ọrụ ná ndụ ha nile dabere na ha. Otú ọ dị, site na Geolọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwuputa na Ngwuputa nke Spain (Igme) ha na-ekwupụta na, ọkara nke nyocha ahụ, "Enwebeghị data doro anya" iguzobe mmekọrịta n’etiti ndị na-enye ọkụ ọgbaghara na mmiri ozuzo Gallocanta, onye na-ahụ maka ọmụmụ ihe ahụ kọwara.
Ihe ekwenyela bụ na mmiri ozuzo agbadatala nke ukwuu na mmiri Gallocanta ma e jiri ya tụnyere akụkụ ndị ọzọ nke peninshula ebe ọ bụ na ejiri ogige a iji gbochie akụ mmiri igwe.
Nnyocha ahụ enwetara data na ịta nke ọlaọcha iodide na ala nke, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke dị elu, gafere oke iwu nke iwu nyere maka iji ala.
Maka onye na-ahụ maka ihu igwe na onye na-eweta ihe nkiri na ngwụsị izu nke El Tiempo na Castilla-La Mancha Media, Jonathan Gómez Cantero, bụ "Kpamkpam agaghị ekwe omume" na-akpata oké ọkọchị, ma dokwuo anya na a na-eji usoro ọlaọcha iodide eme ihe "iji gbanwee ọnọdụ ihu igwe, ọ bụghị nke ihu igwe."
Zere akụ mmiri ígwé na ọlaọcha iodide
Silver iodide bụ mmiri ọgwụ nke na-arụ ọrụ ihe nke na-adọta mmiri, nke ahụ bụ ịsị, hygroscopic. Mgbe ọlaọcha iodide na-abanye na igwe ojii ma jisie ike na-arụ ọrụ (ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ baghị uru maka ịga ije) ọ na-eme ka ọdịda ahụ daa tupu ọ kpụkọọ. Emere nke a iji gbochie akụ mmiri igwe na mmebi ọ nwere ike ibute.
Agbanyeghị, ọkachamara ahụ kwenyere na ọlaọcha iodide nwere ihe egwu dị egwu maka ala na ala mmiri, ebe ọ bụ ọla nke, ọ bụrụ na ọ metụtara anụ ahụ anụmanụ, nwere ike bụrụ ezigbo nsogbu maka usoro nri niile na ọbụna iru ahụ anyị, dị ka ọ dị n'ihe banyere Mercury.
Agbanyeghị, ọ kwughachiri nke ahụ "Ọ dịghị mgbanwe ihu igwe"Nakwa "enweghị ụzọ kemịkal ma ọ bụ ụzọ kemị," dị ka "akụkọ ifo obodo" na-atụ aro. Ha chere na ọ dị mkpa ịgwa ndị ọrụ ugbo okwu ka ha kwụsị iche na ha chọrọ izuru mmiri ozuzo.
Onye na-ekwuchitere ndị ọrụ ugbo ahụ kwenyere na esemokwu a na-amụ n'ihi enweghị iwu na nke a. E nwere ọtụtụ ọrụaka echiche na isiokwu. Studiesfọdụ ọmụmụ na-egosi na iodide enweghị mmetụta; ndị ọzọ na-ekwu na mmiri na-ezo elu; ndị ọzọ, na ọ na-emegharị ya gaa na mpaghara ndị agbata obi; na ndị ọzọ, na ihe a rụpụtara bụ na mmiri na-ezo karịa.
Na mgbakwunye, ọnụ na-ekwuru ya na-ajụ ihe kpatara ya, mgbe ọ zụrụ ahịhịa, ga-egosi kaadị ọkachamara, wee kwuo oge na ebe ọ ga-atụfu ya. Agbanyeghị, gọọmentị na-enye ikikere imetọ ala ha kụrụ.
Na isiokwu nke ụzọ ụkwụ nke chem, enwere ọtụtụ ihe edere na eziokwu bụ na o siri ike ịmata ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị, nyere ọtụtụ echiche na ọdịmma zoro ezo. Ma gị, gịnị ka ị chere maka ihe a niile?
Isi mmalite: Manta Montojo (http://www.efeverde.com/noticias/sistemas-antigranizo-gallocanta/)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Usoro mgbochi akụ mmiri igwe ọ nwere ike ịmetụta ụkọ mmiri na mpaghara mmiri?
Ọdọ ọdọ mmiri maka ịmegharị mmetụta nke mgbanwe ihu igwe